ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ကိန်းဂဏန်းများ၏လျှို့ဝှက်ချက် - Afrikhepri Fondation
Dဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်္ချာဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုသည်။ ဘ ၀ သည်ကိန်းဂဏန်းအစဉ်လိုက်ဖြစ်သည်။ KOUSHITES သည် ၄ ​​င်း၏ဘာသာစကားကိုသိသည်။ သူတို့သည်ဒbasedမစနစ်နှင့်ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံသည့်ဒွိစနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ လူသားများသည်ကွန်ပြူတာကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ပြီးသူ့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအရာအားလုံးနှင့်ထိတွေ့မိသောဆိုက်ဘာနက်တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများသိနားလည်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားနှင့်နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်သောနှုတ်ဖြင့်ဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်လူသားသည်စကြာ ၀ ofာ၏ဥပဒေများနှင့်အညီဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတများအားလုံးတော် ၀ င်နေရာဖြစ်သော Pi နှင့် phi (ရွှေအချိုး) အရတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာသည်အထက်နှင့်တူသည်။
ရှေးအကျဆုံးအရေးအသားသည် Meroitic အရေးအသားဖြစ်သည်။
ကောက်နုတ်ဖော်ပြသော meroitic အရေးအသား (အထက်) သည်အီဂျစ်လူမျုိုးစာအရေးအသားနှင့်ဆင်တူသည်။ ပထမတစ်ချက်မှာအာရုံကိုဆွဲဆောင်တာကစာအရေးအသားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါနံပါတ်များ (1,2,3,4 စသည်တို့) နဲ့ဆင်တူချက်ကိုသတိထားမိခြင်းဖြစ်သည်။
Le Medou Neter "ဘုရားသခင်၏စကားများ" အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါတယ်။ ဒီနာမည်ကိုအီဂျစ်အရေးအသားကိုပေးထားတယ်။ လူများဖတ်ရှုနားလည်နိုင်သောလူရမ်းကားဇာတ်ကောင်များနှင့်ဆန့်ကျင်။ သီးခြားရေးသားထားသောစာလုံးတစ်လုံးသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်များကိုယ်တိုင်သာအသုံးပြုခဲ့သည်။
Le Byblos သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို , ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ Pseudo-ရုပ်စာအရေးအသားကဒီ hierroglyphics အစား hieratic မှရရှိသောလက္ခဏာများစွာရှိသည်။ ဘီစီ ၂၆၀၀ တွင်ဘီဘလော့စ်တွင်အီဂျစ်၏လွှမ်းမိုးမှုမှာအားကြီးသည်။ ဘီဘလိုသည်အာရဇ်သစ်သား၏အဓိကပို့ကုန်ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပြီးအီဂျစ်သို့ပို့ဆောင်သောကြောင့်၊ ထို့ကြောင့်၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုအီဂျစ်အလွှာအရအရေးအသား (Scribes) ကိုသိသောဘီဘလော့စ်မှတစ်စုံတစ် ဦး ကရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ NB: ဤဖလှယ်မှုများ၏စီးပွားဖြစ်သဘောသဘာဝနှင့်တွက်ချက်မှုနှင့်တွက်ချက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့သောကိန်းဂဏန်းများ၏အချက်ကိုမမေ့လျော့ကြကုန်အံ့။
အာရပ်ကိန်းဂဏန်းများကိုအိန္ဒိယတွင်တီထွင်ခဲ့ပြီး ၉ ရာစုမှမွတ်စ်လင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှချေးယူသည်ဟုမကြာခဏပြောတတ်ကြသည်။ ထို့နောက်အလယ်ခေတ်အနောက်ဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းပို့ဆောင်သည်။ စည်းကြပ်။
သို့သော်အီဂျစ်သည်အစ္စရေးနိုင်ငံကို ၆၄၀ မှ ၁၅၁၇ အထိဖြတ်သန်းသွားသည်မဟုတ်လော။
ပထမဦးဆုံးအအာရပ်ကိန်းဂဏန်းအောက်က Codex Vigilanus အတွက်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်
ဒီ“ အာရဗီ” ကိန်းဂဏန်းတွေကအီဂျစ်ကမဟုတ်ဘူးလား။
ကျနော်တို့ဒဿမစနစ်နှင့်သုညရှေးခေတ်အီဂျစ်ရှိ -2700 ဘီစီတည်ရှိခဲ့ဘူးကြောင်းမြင်လိမ့်မည်။
အမှန်မှာ Saqqara ၏ပိရမစ်ကြီးတွင်ကျောက်တုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဘုရင် Zoser ၏အမိန့်ဖြင့်ကျော်ကြားသောဗိသုကာပညာရှင် Imhotep ကတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒီအနီကျောက်ကျောက်, အဖြူရောင် alabaster နှင့်အတူတပ်ဆင်, ခြေလှမ်းပိရမစ်၏သင်္ကေတကိုယ်စားပြုမှုကိုပေးတော်မူ၏ ဆိုလိုသည်မှာအရုပ်စာလုံးများ “ အီဂျစ်အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းဘုရင်ဇိုဇာ၏လျှို့ဝှက်ချက်။ ”။ ဒါဟာစိတ်လှုပ်ရှားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်လည်းငါတို့ဒဿမ system ကိုပြီးသားရှေးခေတ်အီဂျစ်ရှိသောအချို့သောပရိတ်သတ်တွေသိခဲ့ကွောငျးတငျပွခဲ့သ ...
အဆိုပါ7လျှို့ဝှက်ချက်ကိန်းဂဏန်း:
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသင်္ကေတများကို“ နံပါတ်များ” အဖြစ်ဖတ်ပါက ၇၊ ၉၁၇၊ ၉၀၁၄၆၊ ၅၀၃၂၅၈၊ ၆၃၈၄ အားလုံးသည် ၇ ၏မြှောက်ခြင်းများဖြစ်ပြီးအကြီးဆုံးထောင့်ဖြတ်ဂဏန်းများ၏ဂဏန်းများကိုပေါင်းထည့်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့တွင်7(917 + 90146 +) များစွာထပ်ကိန်းရှိသည်။ 5032258 + 6384) (7 +7+6+ 0)
Seshat သို့မဟုတ် Sesheta နတ်ဘုရားမသည်စာရေးခြင်းနှင့်အစီအစဉ်များကိုမြှုပ်နှံသည်။ ဘုရားကျောင်းများ၏အုတ်မြစ်၏ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်အတူဆက်စပ်။
သူမသည်ဗိသုကာ၊ စာပေ၊ နက္ခတ်ဗေဒင်နှင့်နတ်ဘုရားမနတ်ဘုရားမဖြစ်သည်။
ဖာရောနှင့်သူ၏တာ ၀ န်သည်ကြယ်၏အနေအထားအရအနာဂတ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကိုစီစဉ်ရန်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်နတ်သမီးSéshatသည်ကျားသစ်အသားအရေတွင် ဦး ခေါင်း၊ ခေါင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသောတင့်ရောင်တင့်ပွင့်ခုနစ်ပွင့်နှင့်ကြယ်ပွင့်ခုနစ်ခုပါသောကြယ်တစ်ပွင့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ထို့ကြောင့်နံပါတ် (၇) သည်ဂျိုစတာပိရမစ်၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်းသည်နက္ခတ်ဗေဒင်နှင့်သင်္ချာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဆောက်လုပ်ရေးတွင်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရွှေနံပါတ်ဖြစ်သည်။
NB: Shesha အိန္ဒိယဒဏ္ဍာရီတစ်ခုမြွေသည်နှင့်ခေါင်းခုနစ်လုံးနှင့်အတူကြီးမားတဲ့မြွေအဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်။
သို့သော်၎င်းသည်နံပါတ် ၇ ကိုကိုယ်စားပြုသောSéshatသာမကဘဲ၊ ဤနံပါတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်လျှင်၎င်းသည်အီဂျစ်တို့၏မြင့်မြတ်သော Ibis ကို THOT ၏သင်္ကေတအဖြစ်မှတ်ယူစေသည်။ ယခုတွင်သူသည်သူ၏ဇနီးဟုသတ်မှတ်သူSéshatနှင့်ဆင်တူသည်။ စာအရေးအသားနှင့်ဘာသာစကားတီထွင်သူ၊ သူသည်ဗဟုသုတ၏နာယကဖြစ်သည်။ သူသည်ကျမ်းတတ်များနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ ဘိုးဘွားအသိပညာကိုအုပ်ထိန်းသူများအားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရသည်။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ၊ သူသည် Osiris တရားရုံးတွင်သေသူများအကြောင်းကြားနာခြင်းအား ဦး စီး။ လူသေ၏နှလုံးသားကိုအလေးအနက်စဉ်းစားသည်ကိုသေမင်းစာအုပ်၏သရုပ်ဖော်ပုံများတွင်စီရင်ချက်ချသည်။ EDFOU မှသူ၏မွေးဖွားမှုကိုဖော်ပြသည့်စာသားအရ“Thoth နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်လောကဓာတ်ကိုဖန်ဆင်း"; ဒါဟာ assimilated ဖြစ်ပါတယ် လိုဂို (verb) ။ ထို့အပြင်ဘုရားသခငျသညျဘာသာပြန်ဆိုများအတွက်ရုပ်စာ (Neter) တစ်ဦး7ဆင်တူပါသည်။
ခေါင်းတလားတည်ရှိရာနေရာတွင်ပျောက်ဆုံးနေသောကိန်းဂဏန်းသုံးခု၊ လင်ဂါလာရှိသဲကုukuသို့မဟုတ် ciluba ရှိမူဆာ၊ ဆာကော့ဖagus (sarcophagus ကြီးသည် Osiris တွင်ကစားမည့် Khentamentiou ၏“ သခင်၏သေလွန်သူ” အခန်းကဏ္representsကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လျှို့ဝှက်ချက်။ နံရံဆေးရေးပန်းချီကားရဲ့ထိပ်မှာစာသားက "sStA n nsw-bit (y) Dsr ကပြောပါတယ်:" အီဂျစ်အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းဘုရင်၏လျှို့ဝှက်ချက်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဝှက်ထားသောအရေအတွက် 6377784 ဖြစ်ပါသည် (က7911112 ချ. ဝေဖန်သောကွောငျ့တစျခုလုံးကိုအရေအတွက်အားပေးသည်): အရာ၏သော့အရေအတွက် 777 IS ။
sarcophagus တည်ရှိရာစတုဂံအနက်ရောင်ထောင့်မှန်သည်သေလွန်သောသူတို့၏နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုပြီး၊ ဤ“ ငရဲတံခါး” ၏သော့နှင့် ပတ်သက်၍ ၇၇၇ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ၇၇၇ သည်သင်္ချိုင်းဂူကိုကိုယ်စားပြုပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း (ဗဟုသုတ) ကိုရောက်ရှိရန်တ ဦး တည်းဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်က“ ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်၏။ ဂရိဘာသာတွင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို anastasiV ၌ ၇၇၇ တွင်ရေးထားသည်။ ထို့အပြင်ဟေဗြဲ၊ သြသဒေါက်မေရှိယ၌ရေးထားသည်မှာ ၇၇၇ ကိုပေးသည်။ သူ၊ mem, shin, yod, heth, daleth, taw and yod, (777 + 777 + 777 +)5+ 40 + 300 + 10 + 8 = 4) ။
သီအိုရီအရ ၇ + ၇ + ၇ ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင် ၂၁ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိမယ်။
ဤပြrepresentsနာနှင့်လူသား၏ကျဆုံးခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသော ၆၆၆ နှင့်မတူဘဲ ၇၇၇ သည်သေပြီးနောက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည် (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်ပုံဆောင်သဘောအရ) ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးလိုင်း ၆ + ၃ + ၇ + ၇ + ၇ + ၈ + ၄ ၏နောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းအားလုံးကိုပေါင်းပါက ၄၂ ကိုရှာပါ၊ သို့မဟုတ်နံပါတ် ၄၂ သည်တရားခွင်တွင်ရင်ဆိုင်ရမည့်ဘုရားများ၏ဘုရားဖြစ်သည်၊ သမ္မာတရား၊ ဘုရားနှင့်လူသား။ အမှန်စင်စစ် Osiris ကိုအသုဘခုံရုံးရှိနတ်ဘုရား ၄၂ ယောက်ကကူညီသည်။
အကဲဖြတ်သူ ၄၂ ဦး ကိုတရားသူကြီး ၄၂ ဦး အားသေလွန်သူများ၏စာအုပ်အခန်း ၁၂၅ တွင်ခန့်အပ်ထားသည်။ (http://afrikhepri.org/les-commandements-de-la-maat)
ဖါရောဘုရငျ DJOSER အရာ (777) ၏တံခါးသော့ကိုဆက်သွယ်နေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း (7) ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပေးခဲ့တယ်.
အဆိုပါ Kabbalah ခုနှစ်, 168 အထူးသသောမေရှိယ, ဘုရားသခင်နှင့်အတူဆက်နွယ်သူအရေအတွက်ဖြစ်၏ ယခုမှာငါတို့ကဒီကိန်းဂဏန်း (1 + =67) တွင်သော့နှင့် (8-17=) သို့မဟုတ် (6 + = 8 147+ = 7) ကိုရှာဖွေ; ဒါပေမဲ့ဒီအရေအတွက်အရေးပါမှုပေးသည် (+ = 16861 + =68 + 15-1) ကတည်းကသက်ဆိုင်တဲ့56 အရေအတွက်ကိုဖြစ်ပါသည်:6ဒါဝိဒ်သည်ရှောလမုန်သို့မဟုတ်စတားများ၏အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ကကိုယ်စားပြုနေပါတယ် : က Hexagram ဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ Heliopolitan Ennead ခုနှစ်,6ဆက်စပ်နေသည် Osiris ။
အမှန်စင်စစ်ရှေးဟောင်းအဲဂုတ္တုပြည်၌ဆဌမပါဝါခဲ့သည် tekh ဝိညာဏဖြစ်ခြင်းသည်မိမိထက်သာလွန် Ka ၏အမြင့်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ဆက်နွယ်သူတစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီ၏စိတ်နှလုံး-သတိ။ ချိန်ခွင်တစ်ဖက်တွင်, ယုံကြည်ချက်သင်္ကေတလျှောက်ထား၏နှလုံးငွေနှင့်အခြားပေါ်တွင် Maat ၏ကလောင်ခဲ့သည်: ကစိတ်ဝိညာဉ်၌အလေးချိန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ6အရေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုတော်ငါတို့သည်သင်တို့၏အသက်တာ၌ဖြစ်စေရွေးချယ်မှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ အလိုလို ဒုတိယကလေးမွေးဖွားသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရောက်ရှိဖို့။
အရေအတွက်က 168 ဝှက်ထား မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးချွေတာရေးနိယာမ (ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, တစ်ဦးကယ်တင်သောသခင်နှင့်အတူဆက်နွယ်) ရှေိယသနှင့်အတူပြောရလျှင်မဟုတ်ပါ:
La Maat (Osiris ပြုသကဲ့သို့) "သေခြင်းတရားအောင်နိုင်" ကိုသာတတ်နိုင်, "ဒုတိယမွေးခြင်း" နှင့် "ထာဝရအသက်ကို" ရှိသည်။
အရေအတွက်က 777 အဆိုပါဖြစ်တည်မှု Initiative (သင်္ကေတအသေခံ) သင်္ကေတ။
အရေအတွက်က7သော့ချက်, လက်ကျန်ငွေနှင့်တစ်လောကလုံးသဟဇာတခွင့်ပြုပါသောရွှေ, ဖန်တီးမှုထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမီးကျနော်တို့လူ့ဖြစ်တည်မှု (ကုန်းစတင်) ၏အကွေ့အကောက်များသောနှင့်ကျောက်တောင်လမ်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမီးပွားပလပ် (Maat) သည်မှောင်မိုက် (အဝိဇ္ဇာ) အလင်းမှခွင့်ပြုသောမီးပွားသည်။
(ကအခမ်းအနားဘိသိက်ခံမိကျောင်းကရေနံကာလအတွင်းဖြစ်သကဲ့သို့ "ဘိသိက်ခံတဦးတည်း") မှာ FIRST (Initiative) တစ်ဦးက Kristo လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်သခွေငျးလုပ်ကြံရေတွင်းတစ်တွင်း WASIRE, တစ်ဦးက Ausar (Osiris ဖြစ်လာခဲ့သည် WHO က ONE ) တစ်ဦးထမြောက်တော်မူ (သူသည်နောက်တဖန်မွေးဖွားခဲ့သည်များအတွက်): Ausar-Kristo ယေရှု KRST-ထိုအခါယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်လာခဲ့သည် ...
NB: အဆိုပါဘုရင်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားသခငျ၏ "သံတမန်" Maat ၏လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ရန်လူများကိုဖွင့်ဖို့, "ယေရှုခရစ်တော်" စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
(အဆိုပါအသုံးအနှုန်း mdw ntjr KRST (k3R3ST, Karast)“ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်သောသူ” (KA + R)
Ps: rappelez vous de la clé du mystère (7) [wpdiscuz-feedback id=”djcqdk7gvf” question=”Qu’en pensez-vous ?” opened=”1″][/wpdiscuz-feedback]
အစိမ်းရောင် Illusion - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (2019)
ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ negro မဟုတ်ပါ - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၇)